Ungasivikela Kanjani Ngokuphikisana Nesaziso Esibomvu Se-Interpol, Isicelo Sokunwetshwa eDubai
Uhlu Lwezaziso Olubomvu lwe-INTERPOL
Umthetho Wezobugebengu Wamazwe Ngamazwe
I-International Criminal Police Organisation (Interpol) yinhlangano esebenzisana nohulumeni. Yasungulwa ngokusemthethweni ngo-1923, njengamanje inamazwe angamalungu ayi-194. Inhloso yawo enkulu wukusebenza njengenkundla amaphoyisa avela emhlabeni wonke akwazi ukuhlangana ukuze alwe nobugebengu futhi enze umhlaba uphephe kakhudlwana.
I-Interpol ixhuma futhi ixhumanise inethiwekhi yamaphoyisa kanye nochwepheshe mayelana nobugebengu abavela emhlabeni wonke. Ezweni ngalinye elingamalungu ayo, kukhona ama-INTERPOL National Central Bureaus (NCBs). Lezi zikhungo zisebenza ngamaphoyisa kazwelonke.
I-Interpol isiza ekuphenyeni nasekuhlaziyeni idatha ye-forensic yobugebengu, kanye nasekulandeleni ababaleki emthethweni. Banemininingwane egciniwe emaphakathi equkethe ulwazi olubanzi ngezigebengu ezifinyeleleka ngesikhathi sangempela. Ngokuvamile, le nhlangano isekela izizwe ekulweni nobugebengu. Izindawo okugxilwe kuzo ubugebengu bamakhompuyutha, ubugebengu obuhleliwe, nobushokobezi. Futhi njengoba ubugebengu buhlala buguquka, inhlangano iphinde izame ukuthuthukisa izindlela ezengeziwe zokuthungatha izigebengu.
Isikweletu sezithombe: interpol.int/zu
Siyini Isaziso Esibomvu?
Isaziso Esibomvu siyisaziso sokulinda. Kuyisicelo kwabezomthetho emhlabeni wonke ukuthi babophe isikhashana osolwa ngobugebengu. Lesi saziso siyisicelo somthetho wezwe, sicela usizo kwamanye amazwe ukuxazulula ubugebengu noma ukubamba isigebengu. Ngaphandle kwalesi saziso, akunakwenzeka ukulandelela izigebengu ukusuka kwelinye izwe ukuya kwelinye. Benza lokhu kuboshwa kwesikhashana kusalindwe ukuzinikela, ukubuyiselwa ezweni, noma esinye isenzo somthetho.
I-INTERPOL ivamise ukukhipha lesi saziso ngokuyalelwa yizwe elingamalungu. Akudingeki ukuthi leli zwe kube yikhaya lomsolwa. Nokho, kufanele kube yizwe lapho ubugebengu benziwa khona. Ukukhishwa kwezaziso ezibomvu kuphathwa ngokubaluleke kakhulu kuwo wonke amazwe. Kuchaza ukuthi umsolwa okukhulunywa ngaye uyingozi kwezokuphepha komphakathi futhi kufanele aphathwe kanjalo.
Isaziso esibomvu, nokho, akusona isiyalo sokuboshwa samazwe ngamazwe. Kumane kuyisaziso somuntu ofunwayo. Lokhu kungenxa yokuthi i-INTERPOL ayikwazi ukuphoqelela abomthetho kunoma yiliphi izwe ukuthi babophe umuntu okhishwe ngesaziso esibomvu. Izwe ngalinye eliyilungu linquma ukuthi libeka liphi inani elingokomthetho eSaziso Esibomvu kanye negunya leziphathimandla zalo zomthetho ukuze libophe.
7 izinhlobo zesaziso se-Interpol
Isaziso esibomvu sinzima kakhulu kuzo zonke izaziso futhi ukukhishwa kungabangela imiphumela emibi phakathi kwezizwe zomhlaba. Kubonisa ukuthi umuntu uyingozi ekuphepheni komphakathi futhi kufanele kusingathwe kanjalo. Inhloso yesaziso esibomvu imvamisa ukuboshwa nokuphindiselwa ngaphandle.
I-Extradition ichazwa njengenqubo esemthethweni lapho uMbuso othile (uMbuso ocelayo noma izwe) ucela omunye uMbuso (uMbuso oceliwe) ukuthi unikeze umuntu osolwa ngecala lobugebengu noma ubugebengu eMbusweni ocelayo ukuze aquliswe icala lobugebengu noma agwetshwe. Kuyinqubo lapho umbaleki edluliswa esuka endaweni ethile eyiswa kwenye. Ngokuvamile, umuntu uhlala noma uphephele eSifundazweni esiceliwe kodwa usolwa ngamacala obugebengu enziwa kusifunda esicelayo futhi ajeziswe yimithetho yoMbuso ofanayo.
Yimaphi Amacala Ongawadlulisela E-UAE?
Obunye ubugebengu okungenzeka buphoqeleke ukukhishwa e-UAE buhlanganisa ubugebengu obubucayi kakhulu, ukubulala, ukuthumba, ukushushumbiswa kwezidakamizwa, ubuphekula, ukugqekeza, ukudlwengula, ukuhlukumeza ngokocansi, ubugebengu bezezimali, ukukhwabanisa, ukukhwabanisela, ukwephula ukwethenjwa, ukufumbathisa, ukushushumbisa imali, ukushiswa kwempahla, noma ubunhloli.
Phakathi kwezaziso eziningi ezibomvu ezinikezwe abantu, ezinye zigqamile. Iningi lalezi zaziso belisekelwa yizinhloso zepolitiki noma ukuhlambalaza umuntu okukhulunywa ngaye. Ezinye zezaziso ezibomvu ezithandwa kakhulu zifaka:
# 1. Isicelo sesaziso esibomvu sokuboshwa kukaPancho Campo ngumlingani wakhe waseDubai
UPancho Campo wayenguchwepheshe wethenisi waseSpain futhi engusomabhizinisi onamabhizinisi asungulwe e-Italy naseRussia. Ngesikhathi ezothatha uhambo, wavalelwa esikhumulweni sezindiza saseMelika futhi wadingiswa ngesizathu sokuthi unikezwe isaziso esibomvu esivela e-UAE. Lesi saziso esibomvu sikhishwe ngenxa yengxabano phakathi kwakhe nowayesebenzisana naye eDubai.
Uzakwethu webhizinisi ubesole uCampo ngokuvala inkampani yakhe ngaphandle kwemvume yakhe. Lokhu kwaholela ekutheni kuqulwe icala yena engekho. Ekugcineni, inkantolo yammemezela ukuthi unecala lokukhwabanisa futhi yakhipha inothisi ebomvu nge-INTERPOL ngokumelene naye. Nokho, walilwela leli cala futhi wahlenga isithombe sakhe ngemva kweminyaka engu-14 yokulwa.
# 2. Ukuboshwa kukaHakeem Al-Araibi
UHakeem Al-Araibi wayengumdlali webhola lezinyawo waseBahrain futhi wanikezwa isaziso esibomvu esivela eBahrain ngo-2018.
Ngokwemithetho yayo, isaziso esibomvu ngeke sikhishwe ngokumelene nababaleki egameni lezwe ababalekela kulo. Ngakho-ke, akumangazi ukuthi ukukhishwa kwesaziso esibomvu ngokumelene no-Al-Araibi kwahlangatshezwana nentukuthelo yomphakathi njengoba wayengumbaleki obalekela uhulumeni waseBahrain. Ekugcineni, isaziso esibomvu sasuswa ngo-2019.
# 3. Isicelo sesaziso esibomvu se-Iranian sokuboshwa kanye nokubuyiselwa kukaDonald Trump- owayengumongameli wase-US
Uhulumeni wase-Iran wakhipha isaziso esibomvu ngokumelene nomongameli wase-United States, u-Donald Trump, ngoJanuwari 2021. Lesi saziso sakhishwa ukuze ashushiswe ngokubulala ujenene wase-Iran u-Qassem Soleimani. Isaziso esibomvu saqale sakhishwa ehlezi saphinde savuselelwa ngesikhathi esehla esikhundleni.
Kodwa-ke, i-INTERPOL isichithile isicelo se-Iran sesaziso esibomvu sikaTrump. Lokhu ikwenze ngoba uMthethosisekelo wayo uyivumela ngokusobala i-INTERPOL ukuthi ingazibandakanyi nanoma iyiphi inkinga esekelwa yizinhloso zezombusazwe, ezempi, ezenkolo, noma ezobuhlanga.
# 4. Isicelo seRed Government Government Red sokubopha uWilliam Felix Browder
Ngo-2013, uhulumeni waseRussia wazama ukwenza i-INTERPOL ukuthi ikhiphe isaziso esibomvu sibhekiswe ku-CEO weHermitage Holding Company, uWilliam Felix Browder. Ngaphambi kwalokho, uBrowder wayexabene nohulumeni waseRussia ngemuva kokuthi ebafakele icala lokwephula amalungelo abantu nokuphathwa ngonya komngani wakhe nozakwabo uSergei Magnitsky.
UMagnitsky wayeyinhloko yezentela eFireplace Duncan, okuyinkampani ephethwe yiBrowder. Ubefake isimangalo kubaphathi bezangaphakathi baseRussia ngokusetshenziswa ngokungemthetho kwamagama ezinkampani ngenkohliso. Kamuva uMagnitsky waboshwa esemzini wakhe, waboshwa futhi washaywa yizikhulu. Washona eminyakeni embalwa kamuva. UBrowder wabe eseqala ukulwa nokungabi nabulungisa okwenziwa kumngani wakhe, okwaholela ekutheni iRussia imxoshe ezweni futhi athathe izinkampani zakhe.
Ngemuva kwalokho, uhulumeni waseRussia wenza umzamo wokubeka iBrowder kwisaziso esibomvu ngamacala okweqa intela. Kodwa-ke, abakwa-INTERPOL basenqabile lesi sicelo kwazise izinhloso zepolitiki besisekele.
# 5. Isicelo se-Red Red Ukraine sokuboshwa kwalowo owayengumbusi wase-Ukraine uViktor Yanukovych
Ngo-2015, i-INTERPOL yakhipha isaziso esibomvu sibhekiswe kowayenguMongameli wase-Ukraine, uViktor Yanukovych. Lokhu kube ngesicelo sikahulumeni wase-Ukraine ngamacala okukhwabanisa nokona ngokwezezimali.
Ngonyaka owodwa ngaphambi kwalokhu, uYanukovych wayexoshiwe kuhulumeni ngenxa yezingxabano phakathi kwamaphoyisa nababhikishi, okwaholela ekufeni kwezakhamuzi ezimbalwa. Wabe esebalekela eRussia. Futhi ngoJanuwari 2019, waquliswa icala futhi wagwetshwa iminyaka eyishumi nantathu ejele lapho engekho yinkantolo yase-Ukraine.
# 6. Isicelo sesaziso esibomvu esenziwe yiTurkey sokuboshwa kuka-Enes Kanter
NgoJanuwari 2019, iziphathimandla zaseTurkey zafuna isaziso esibomvu ku-Enes Kanter, isikhungo sasePortland Trail Blazers, zimsola ngokuba nobudlelwano nenhlangano yamaphekula. Iziphathimandla ziveze ukuthi wayexhumene noFethullah Gulen, umfundisi ongumSulumane owayedingisiwe. Baqhubeka nokusola uKanter ngokunikeza usizo lwezezimali eqenjini likaGulen.
Ukusatshiswa ngokuboshwa kuvimbele uKanter ukuthi aphume eMelika ngenxa yokwesaba ukuthi uzoboshwa. Yize kunjalo, ukuphikile okushiwo yiTurkey, wathi abukho ubufakazi obusekela lezi zinsolo.
Okufanele ukwenze Lapho i-INTERPOL Ikhipha Isaziso Esibomvu
Ukuba nesaziso esibomvu esikhishwe ngokumelene nawe kungalimaza isithunzi sakho, umsebenzi wakho, nebhizinisi. Kodwa-ke, ngosizo olufanele, unganikezwa ukusabalalisa kwesaziso esibomvu. Uma ukhishwa isaziso esibomvu, lezi yizinyathelo okufanele uzithathe:
Thinta Ikhomishini Yokulawula Amafayela E-INTERPOL (CCF).
Xhumana neziphathimandla zezomthetho zezwe lapho kukhishwe khona isaziso ukuze kususwe isaziso.
Uma isaziso sisekelwe kwizizathu ezinganele, ungacela kwiziphathimandla ezweni ohlala kulo ukuthi imininingwane yakho isuswe ku-database ye-INTERPOL.
Isigaba ngasinye kulezi singaba nzima ukusisingatha ngaphandle kosizo lommeli ofanelekayo. Futhi-ke, thina, ku Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants, bayafaneleka futhi bakulungele ukukusiza kuzo zonke izigaba zenqubo kuze kube yilapho igama lakho selisuliwe. Sishayele manje ukuze uthole isikhathi esiphuthumayo ku- + 971506531334 + 971558018669
I-INTERPOL Iyisebenzisa Kanjani Imidiya Yezokuxhumana
Imithombo yezokuxhumana ikhombisile ukuba neqhaza ku-INTERPOL noma kunoma iyiphi i-ejensi yokuqinisa umthetho ekudlaleni izindima zayo. Ngosizo lwe-Social media, i-INTERPOL ingenza okulandelayo:
Xhuma nomphakathi: I-INTERPOL isezinkundleni zokuxhumana ezifana ne-Instagram, Twitter, nokunye. Inhloso yalokhu ukuxhumana noquqaba, ukudlulisa ulwazi, nokwamukela impendulo. Ngaphezu kwalokho, lezi zinkundla zenza umphakathi ukwazi ukubika noma yimuphi umuntu noma iqembu elisolwa ngokubandakanyeka emisebenzini engekho emthethweni.
Isibambiso: Izinkundla zokuxhumana zibe nesandla ekutholeni izigebengu ebezifunwa uthuli. Ngosizo lwesamanisi, i-INTERPOL ingadalula izigebengu ezicashe ngemuva kokuthunyelwe nama-akhawunti ezinkundla zokuxhumana ezingaziwa. I-subpoena ukugunyazwa yinkantolo yomthetho ukuthola ulwazi, ikakhulukazi oluyimfihlo, ngezinjongo zomthetho.
Indawo yokulandela: Izinkundla zokuxhumana zenze ukuthi i-INTERPOL ikwazi ukulandelela indawo yabasolwa. Ngokusetshenziswa kwezithombe, amavidiyo kuyenzeka ukuthi i-INTERPOL ikhombe ukuthi bakuphi abasolwa. Lokhu kube usizo ekulandeleni ngisho namaqembu obugebengu amakhulu ngenxa yokumaka indawo. Ezinye izinkundla zokuxhumana ezifana ne-Instagram zisebenzisa kakhulu ukumaka indawo, okwenza kube lula kwabomthetho ukufinyelela ebufakazini bezithombe.
Umsebenzi we-Sting: Leli yigama lekhodi lomsebenzi lapho abomthetho bezifihla khona ukuze babambe isigebengu sigasele. Le ndlela efanayo isetshenziswe ezinkundleni zokuxhumana futhi ibonakale iphumelela. Izikhungo zomthetho zingasebenzisa ama-akhawunti mbumbulu ezinkundla zokuxhumana ukuze ziveze izigebengu ezinjengabashushumbisi bezidakamizwa kanye nabanukubezi.
I-INTERPOL ikwenza lokhu ezigebengwini ezifuna isiphephelo ezweni okungelona elazo. I-INTERPOL ibopha abantu abanjalo bese ithola indlela yokubabuyisela ezweni labo ukuze babhekane nengalo yomthetho.
Ukuvikela Okungenzeka Kwezomthetho Ngokumelene Nesicelo Sokwengeza E-UAE
Ukungqubuzana Kwezomthetho noma Kwezomthetho
Kwezinye izimo, kukhona ukungqubuzana phakathi kwemithetho ecelayo yendawo noma izinqubo zokubuyisela kanye nalezo ze-UAE. Wena noma ummeli wakho ningasebenzisa lo mehluko, okuhlanganisa namazwe angazange asayine isivumelwano sokubuyisela ne-UAE, ukuze niphonsele inselelo isicelo sokubuyisela.
Ukuntula Ubugebengu Obubili
Ngokomgomo wobugebengu obubili, umuntu angaphindiselwa kuphela uma icala asolwa ngalo lifaneleka njengecala kukho kokubili okuceliwe kanye noMbuso oceliwe. Unezizathu zokuphonsela inselelo isicelo sokubuyisela lapho icala elisolwayo noma ukwephulwa komthetho kungathathwa njengobugebengu e-UAE.
Umbuso oceliwe awuphoqelekile ukuthi ubuyisele umuntu ezweni uma enezizathu zokukholelwa ukuthi izwe elicelayo lizobandlulula umuntu ngenxa yobuzwe, ubulili, uhlanga, imvelaphi, inkolo, ngisho nokuma kwakhe kwezombusazwe. Ungasebenzisa ukushushiswa okungenzeka ukuphonsela inselelo isicelo sokubuyiselwa.
Ngaphandle kwemithetho yamazwe ngamazwe, izwe lingenqaba isicelo sokubuyiselwa ukuze kuvikelwe izakhamuzi zalo noma abantu abanobuzwe obukabili. Kodwa-ke, uMbuso oceliwe usengashushisa umuntu ngaphansi kwemithetho yawo ngisho noma umvikela ekudingisweni.
Amazwe ahlukene angase ahluke ngokwezombangazwe, futhi izicelo zokubuyiselwa kwamanye amazwe zingabhekwa njengokugxambukela kwezombusazwe, yingakho ukwenqatshwa kwalezi zicelo. Ukwengeza, amaZwe ahlukene anemibono eyahlukene ezindabeni ezinjengamalungelo abantu, okwenza kube nzima ukuvumelana ngezicelo zokubuyiselwa kwamanye amazwe, ikakhulukazi lezo ezithinta izindaba ezihlukene.
Amacala ezomthetho afaka izaziso ezibomvu e-UAE kufanele aphathwe ngokucophelela nangobuchwepheshe. Badinga abameli abanolwazi olukhulu ngale ndaba. Ummeli ojwayelekile wezokuvikela ubugebengu kungenzeka angabi nalo ikhono nolwazi oludingekayo lokusingatha izindaba ezinjalo.
Ngenhlanhla, abameli bezomthetho bamazwe omhlaba e Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants ube nalokho okudingayo. Sizibophezele ekuqinisekiseni ukuthi amalungelo amaklayenti ethu awaphulwa nganoma yisiphi isizathu. Sikulungele ukumela amaklayenti ethu futhi sibavikele. Sikunikeza ukumelwa okuhle kakhulu emacaleni obugebengu bamazwe omhlaba ngokukhethekile ezindabeni zeSaziso Esibomvu.
Ubungcweti bethu buhlanganisa kepha abungagcini kulokhu: Ukwenza kwethu kubandakanya: I-International Criminal Law, Extradition, Mutual Legal Assistance, Judicial Assistance, kanye ne-International Law.
Ngakho-ke uma wena noma othandekayo enesaziso esibomvu esikhishwe ngokumelene nabo, singasiza. Xhumana nathi namuhla!